In ka badan 15 milyan oo sanduuq ayaa la dalbaday! Tijaabinta reagent waxay soo dhaweyneysaa muddada qaraxa (ku lifaaqan waa CE iyo FDA soo saare liistada soo saaraha)
1. Yaraanta qalabka ogaanshaha nucleic acid waxay noqon doontaa dhibaato caalami ah. 2. Shirkadaha Shiinaha ee loo yaqaan 'IVD' waxay awood u leeyihiin inay dibedda u baxaan oo ay la tartamaan shirkadaha heerka caalami ah. 3, tijaabinta suuqa fowdo reagent, tallaabada rasmiga ah ee daroogada xakamaynta! Shirkado badan oo IVD ah ayaa helay fir ...
Qaar ka mid ah xirmooyinka tijaabada 'COVID-19' waxaa ogolaaday FDA si loogu soo qaado shaybaarada guriga
Bishii Abriil 21, LabCorp, oo ah shirkad cilmiga nolosha ah, ayaa ku shaacisay boggeeda rasmiga ah inay heshay oggolaanshaha Isticmaalka Degdegga ah ee FDA ee Qalabka Baaritaanka Novel Coronavirus oo laga heli karo Guriga. Qalabka Imtixaanka AT-Home, oo loo adeegsan karo in lagu soo qaado shaybaarada Tijaabada Guriga, ayaa dadka u oggolaanaya inay soo diraan ...
Realy Tech waxay si guul leh uga qeyb gashay MEDICA Dusseldorf 2019
Realy Tech waxay si guul leh uga qeyb gashay FIME Miami 2019
Bandhiggii ugu horreeyay ee sannadka cusub– Hangzhou Realy Tech ayaa ka dhoofay Dubai
MEDLAB Bariga Dhexe oo ay soo qabanqaabisay Informa, oo ah mid ka mid ah bandhigyada ugu muhiimsan ee goobta IVD ayaa la qabtay 3dii Feb ilaa 6th Feb, 2020 Xarunta Ganacsiga Adduunka ee Dubai, Emirates. Bandhiggan ayaa soo jiitay in ka badan 600 oo bandhig oo ka kala yimid 40 dal. Qiyaastii 500 nooc oo Laborat medical ...